Ecrebo: Kuita Yako POS Chiitiko | Martech Zone
Chitatu, Kurume 1, 2017 China, Kurume 2, 2017 Douglas Karr
Kufambira mberi muhunyanzvi kuri kupa mikana isingaite kumakambani ekuvandudza ruzivo rwevatengi. Kuita kwako munhu hakungobatsira chete kune mabhizinesi, kunoongwa nevatengi. Tinoda kuti mabhizinesi atinogara tichiziva kuti tiri vanaani, atipe mubairo nekuda kwekubata kwedu, uye atipe kurudziro kwatiri kana rwendo rwekutenga rurikuenderera.
Mumwe mukana wakadai urikudanwa POS Kushambadzira. POS inomiririra Point of Sale, uye ndiyo michina inoshandiswa nevekutengesa kuti uone. Hazvishamise kuti makambani ave nehurongwa hwekuvimbika uye makadhi ekuderedzwa kuti atarise zvakatengwa kusvika kumutengi… asi iyo data inowanzo nyorwa yozoshandiswa kushambadzira kwavari kuburikidza neemail kana tsamba yakananga.
Ko kana iwe uchikwanisa kuwana data revatengi ipapo uye nekutaurirana wakanangana nekutarisa? Uyu ndiwo mukana nePOS Kushambadzira.
Ecrebo poindi yekutengesa chikuva inoita kuti vatengesi vaendese zvakanangwa kune vatengi pavanotenga padivi peresiti yavo kana risiti yedhijitari. With pamusoro pe90% yezvinhu zvinoitika mu-chitoro, Tekinoro yePOS-based yeEcrebo inogonesa vatengesi kuendesa yakanangana nekutengesa kutaurirana kwakagadzirirwa mutengi wega wega.
Vatengi vanobatsirwa nekuwana zvakakosha zvinopihwa uye zvinokurudzirwa zvinounzwa nenzira iri nyore uye isiri yekuvhiringidza. Ecrebo masimba poindi yekutengesa kushambadzira kwemakambani anotungamira anosanganisira Mirira (grocery), M&S (dhipatimendi rechitoro) uye PANDORA (zvishongo).
Ecrebo POS Kushambadzira Zvimiro
Targeted Coupons ku Checkout - Nunura zvakakosha, zvekutenga-based zvinopihwa uye mameseji akananga kune-muchitoro vatengi. Dhiraivha kuwedzera kuwedzera kwekutengesa, kuwedzera muchinjikwa-chikamu kutenga, uye kuwedzera vatengi kuvimbika.
Yakasarudzika Dhijitari Mareti - Ipa vatengi vako nzira iri nyore yekutambira uye yekuchengetedza mareti avo. Dhijitari mareti anowedzera ruzivo rwevatengi uye anovhura post-yekutengesa yekushambadzira chiteshi.
PANDORA, imwe yemhando yepamusoro yezvishongo zvepasi rose, yave kushandisa Ecrebo kuendesa maretiiti edhijitari kune yayo 220-yakasimba UK chitoro chivakwa. Mareti anotumirwa emaimeri kune vatengi zvichitevera kutengesa kwavo uye zvinosanganisira sarudzo yekupinda mukati kuti ugamuchire tsamba dzetsamba dzese, pamwe nechikumbiro chemhinduro yevatengi, zvichibvumira vatengi kuti vataure pane yavo yechitoro chiitiko.
Isu tinoshandisawo risiti yedhijitari semukana wekukumbira mhinduro kubva kune vatengi vedu pane yavo yechitoro ruzivo, zvichitigonesa kuramba tichivandudza kupa kwedu. Jo Glynn-Smith, VP wekushambadzira, PANDORA UK
Ecrebo data rakapihwa kudzoserwa kumaneja ezvitoro uye PANDORA UK hofisi hofisi kubatsira kambani kuti inzwisise mashandiro avo ezvitoro pamwe nekuziva chero nzvimbo dzekuvandudza.
Tags: BudaCheckout couponsCouponsecreboM&SPANDORAPersonalizationmunhu zvichienderana posmarisiti akasarudzikapoindi yekutengesapoindi yekutengesa kushambadzirapoindi yekutengesaPosMirira